"အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့လေကြောင်း" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့လေကြောင်း" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့လေကြောင်း (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၈:၄၈၊ ၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၁၄ ရက်နေ့က မူ
၃ ဘိုက် ဖယ်ရှားခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၆ နှစ်
၁၁:၁၂၊ ၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၃ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
အရေးမကြီး (The file Image:MAIruby.jpg has been removed, as it has been deleted by commons:User:Russavia: ''Copyright violation, see commons:Commons:Licensing''. ''Translate me!'')
၁၈:၄၈၊ ၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၁၄ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
၁၉၄၆ လွတ်လပ်ရေးမရမီကာလက အစိုးရမှ Union of Burma Airways အနေဖြင့် ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များ စတင်ပျံသန်းခဲ့သည်။ ၁၉၅၀တွင် နိုင်ငံတကာခရီးစဉ်များ စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ ဒီဇင်ဘာတွင် Burma Airways ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ပြီး ၁၉၈၉ ဧပြီ ၁တွင် ဘားမားမှမြန်မာသို့ အမည်ပြောင်းပြီးသည်.နောက် မြန်မာ့လေကြောင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၃တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့လေကြောင်း တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ပြည်ပခရီးစဉ်များအားလုံးကို ၄င်းအောက်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။
၁၉၉၃ သြဂုတ်တွင်ဩဂုတ်တွင် စတင်ပျံသန်းခဲ့သော အမ်အေအိုင်သည် [[တော်၀င်ဘရူနိုင်းလေကြောင်းတော်ဝင်ဘရူနိုင်းလေကြောင်း]]၏ အကူအညီဖြင့် [[မြန်မာ့လေကြောင်း]]နှင့် စင်ကာပူအခြေစိုက်Highsonic Enterprisesတို့၏ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ မူလတွင် စင်ကာပူအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့([[စင်ကာပူ လေကြောင်းလိုင်း]] ၀န်ထမ်းဟောင်းများဝန်ထမ်းဟောင်းများ)၊ ဘိုးရင်းလေယာဉ်အသစ်များ၊ အတွေ့အကြုံရှိ လေယာဉ်အမှုထမ်းများ၊ လေယာဉ်မောင်မယ်အသစ်သင်တန်းများ၊ အင်္ဂလန်လေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း၏ လေယာဉ်ပျံသန်းမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်သောအရည်အချင်းများ စသည်တို့ဖြင့် ၀င့်ကြွားခဲ့သည်။ တဖြည်းဖြည်းဖြင့် မူလ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး မြန်မာအပြည့်အ၀ပိုင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ ဇန်နဝါရီတွင် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး ထိုသဘောတူညီမှုအရ Region Air Myanmar (HK) Ltd., မှ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးမှ သူ၏ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Zan Co.အမည်ဖြင့် ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ [[မြန်မာ့လေကြောင်း]]မှ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ၂၀၀၁တွင်ပင် လေကြောင်းလိုင်း၏ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် လေယာဉ်ဆေးခြယ်သမှု ပုံစံအသစ်များ ထွက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး အကြီးစား လေယာဉ်မောင်မယ် အဆင့်မြှင့်တင်မှုသင်တန်းများ ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ တွင်အမ်အေအိုင်သည် အိုင်အေတီအေ(IATA)မှ ချပေးသော သီးသန့် ကုပ်ဒ်ကို ရရှိခဲ့သည်။ ယခင်က [[မြန်မာ့လေကြောင်း]]၏ သီးသန့် ကုပ်ဒ်ဖြစ်သော UNIONAIR ဖြင့်သာ ပျံသန်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အိုင်အေတီအေ၏ ဘုံအသွားအလာသဘောတူညီမှု(Multilateral Interline Traffic Agreement (MITA)) နှင့် IATA Clearing House တို့တွင်လည်း အဖွဲ့၀င်ဖြစ်လာခဲ့သည်။အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ [[မလေးရှားလေကြောင်း]] နှင့် [[တော်၀င်ဘရူနိုင်းလေကြောင်းတော်ဝင်ဘရူနိုင်းလေကြောင်း]] တို့တွင် သင်တန်းများတက်ရောက်ရန် ၀န်ထမ်း၁၂၂ယောက်ဝန်ထမ်း၁၂၂ယောက် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ တွင် ဘန်ကောက်-ရန်ကုန်-ဘန်ကောက် လမ်းကြောင်း၌ [[အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိုင်းလေကြောင်း]]နှင့် ကုပ်ဒ်ရှယ်ရာ အစီအစဉ် စတင်ခဲ့သည်။ အမ်အေအိုင်သည် [[မလေးရှားလေကြောင်း]]၊ [[ကာတာလေကြောင်းလိုင်း]]နှင့် [[ဂျက်စတားအေးရှား]] တို့နှင့်လည်း ကုပ်ဒ်ရှယ်ရာ အစီအစဉ်ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ၂၀၀၄ တွင် မြေပြင်၀န်ထမ်းများအတွက်မြေပြင်ဝန်ထမ်းများအတွက် တူညီ၀တ်စုံအသစ်များတူညီဝတ်စုံအသစ်များ မှာယူခဲ့ပြီး လေယာဉ်မောင်မယ်သင်တန်းနည်းပြ ၁၆ဦး ထပ်မံခေါ်ယူခဲ့သည်။
၂၀၀၇ ဖေဖော်ဝါရီတွင် Region Air Myanmar (HK) Ltd.,နိုင်ငံခြားအုပ်ချုပ်မှုဌာနမှ အမ်အေအိုင်သို့ အုပ်ချုပ်ရေးတာ၀န်များအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်များ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။
[[File:Myanmar Airways International Boeing 737-400 Maiwald.jpg|thumb|left|250px|ဟောင်ကောင်သို့ဆင်းသက်နေသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာ့လေကြောင်း ဘိုးရင်း၇၃၇-၄၀၀လေယာဉ်တစ်စီး(၁၉၉၇)]]
[[File:MAI Boeing 737-800 KCS-1.jpg|thumb|right|250px|အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာ့လေကြောင်း ဘိုးရင်း၇၃၇-၈၀၀လေယာဉ်တစ်စီး(၂၀၀၃)၊ ထိုလေယာဉ်ဆေးခြယ်သမှုပုံစံကို ၂၀၀၁မှ၂၀၀၉အထိ အသုံးပြုခဲ့သည်]]
ဤဖောက်သည် အစီအစဉ်တွင် စိန် နှင့် ပတ္တမြား ဟူ၍ အသင်း၀င်အသင်းဝင် အဆင့်နှစ်မျိုး ရှိသည်။ တစ်နှစ်အတွင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့လေကြောင်းဖြင့် အသွားအပြန်ခရီး ၃ခေါက် ပျံသန်းပြီးသူများသည် ပတ္တမြားအသင်း၀င်ပတ္တမြားအသင်းဝင် အဖြစ်လျောက်ထားနိုင်ပြီး နောက်တစ်ဆင့်အတွက် လိုအပ်သော အမှတ်များ စတင်စုဆောင်း နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ပတ္တမြားအသင်း၀င်ပတ္တမြားအသင်းဝင် အဖြစ်ဖြင့် အနည်းဆုံး အသွားအပြန်ခရီး ၆ခေါက် ပျံသန်းပြီးပါက အလိုအလျောက် စိန်အဆင့် အသင်း၀င်အသင်းဝင် သို့ တိုးမြင့်သွားမည် ဖြစ်သည်။ တိမ်လွှာအပြုံး အသင်း၀င်များသည်အသင်းဝင်များသည် အမ်အေအိုင်ဖြင့် ပျံသန်း၍ရရှိသော အမှတ်များနှင့် ညီမျှသည့် အခမဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်များ ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
[[ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်]] ရှိတိမ်လွှာအပြုံး ခန်းမဆောင်သည် စိန်အဆင့် အသင်း၀င်များအသင်းဝင်များ နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအတန်းစီး(business class) ခရီးသည်များ အတွက်ဖြစ်ပြီး အစားအစာများ၊ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များ နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် လိုအပ်သည့် ၀န်ဆောင်မှုများပါ၀င်သည်။ဝန်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်။
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/216147" မှ ရယူရန်